Kwindlela ezolileyo, efileyo kumgama nje om-2 wokuhamba ukuya kwisitrato esikhulu sembali saseHahndorf sihlala indawo yethu yokuhlala eyahlukileyo. Indlu yethu yokuqala, sigqibile ukulungisa ingaphakathi lebali elisezantsi, ekuqaleni igaraji, kumagumbi amabini amahle, iindawo zokuhlala ezimbini kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. IHahndorf ikwindlela nje emfutshane yokuqhuba kwezona wayini zibalaseleyo kwiAdelaide Hills, kunye nendawo efanelekileyo phakathi kwemimandla yewayini eyaziwayo kwihlabathi iBarossa Valley kunye neMcLaren vale.
Indawo yokuhlala yeendwendwe yahluke ngokupheleleyo kwimigangatho yethu ephezulu, ngaphandle kwezitepsi zokuzimanya zombini. Nceda uqaphele ukuba akukho sinki yasekhitshini okanye indawo yokupheka ekhoyo, kodwa xa uhamba nje imizuzu embalwa usuka kwezinye zezona ndawo zintle zekhefi kunye neendawo zokutyela iinduli ezinokuthi zibonelele, kutheni ungaziphathi? Iindwendwe ziya kubonelelwa ngefriji yazo, imicrowave, iketile, iti/ikofu kunye netoaster.
4.89 ·Izimvo eziyi-122
4.89 · Izimvo eziyi-122
Ibekwe kwindlela ethe cwaka, iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kwindawo yokupaka iimoto ezitratweni ezimbini, ezinoluhlu lweendawo zokutyela esizithandayo, iivenkile zokutyela, iivenkile ezikumgama wokuhamba. Kukwakho nepaki enebala lokudlala nje ukugibiselwa kwamatye ukusuka kumnyango wangaphambili.
Sinikezela ngeendwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo ukuqinisekisa ukuhlala okukhululekile kunye nokonwabela. Nangona kunjalo sihlala kwigumbi eliphezulu lendlu, ngoko siya kukwazi ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo ngokufowuna / ukuthumela imiyalezo nangaliphi na ixesha.
Sinikezela ngeendwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo ukuqinisekisa ukuhlala okukhululekile kunye nokonwabela. Nangona kunjalo sihlala kwigumbi eliphezulu lendlu, ngoko siya kukwazi…